नेकपा भित्र राजा महेन्द्रको शालिक भत्काउने माग उठेपछि ! – Halkhabar kura
२० माघ २०७६, सोमबार १५:५२
नेकपा भित्र राजा महेन्द्रको शालिक भत्काउने माग उठेपछि !
पार्टी बैठकमा ओलीले राखेको १० हजार शब्दभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ
र केन्द्रीय कमिटीका सम्पूर्ण सदस्य कमरेडहरू
पार्टी एकीकरणपछि नयाँ चरणमा छौं- एउटा कुराको भ्रमचाहिँ रहनु हुँदैन कि सरकारको कारणले वा प्रधानमन्त्रीको कारणले, प्र्रधानमन्त्रीले समय दिन नसकेर जस्ता कुराहरूले यो बिलम्व या ढिला भयो रु यो होइन, विविध कारणले बिलम्व भयो । यसमा हाम्रो गंभीरताका साथ ध्यान गएको छ । यस्तो हुन हुने थिएन भन्ने महशुस पनि गरिएको छ । भविष्यमा यस्तो बिलम्व नहुने कुरा स्पष्ट पनि छ । म यो कुरा शुरुमै स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
सात दशक लामो निष्ठाको आन्दोलन- हामीसँग ७१ वर्षका संगठित अनुभवहरू छन् । संगठितढंगले हामीले सात दशकदेखि वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक र व्यवहारिक आन्दोलनका क्षेत्रहरूलाई अनेक उतारचढावहरूका साथ झेलेका छौं । हामीसँग प्रतिबन्धित अवस्थाका अनुभवहरू छन् । दमनका अनुभवहरू छन् । जेलनेलका अनुभवहरू छन् । निर्वासनका अनुभवहरू छन् । लडाईंका अनुभवहरू छन् । हामीसँग अनेक प्रकारका पीडाका अनुभवहरू छन् । हामीले गुमाएका अनुभव पनि छन् र सफलता हासिल गरेका अनुभूति पनि छन् । हामीले प्रतिबन्धित अवस्थामा, प्रतिपक्षमा बसेर पनि अनुभव हासिल गरेका छौं । हामीले सरकारमा पुगेर, सरकारमा सहभागी भएर सहभागीका हैसियतले पनि अनुभव हासिल गरेका छौं । र, हामीले सरकार संचालन गरेर, सरकारको नेतृत्व गरेको अनुभव पनि हासिल गरेका छौं । अल्पमतका सरकार, अरुसँग मिलिजुली बनाएका सरकार अथवा अहिले बहुमतको सरकारको पनि अनुभव गरिरहेका छौं । हामीले विगतका वर्षहरूमा विभाजनका पीडा भोगेका छौं । एकता र सफलताका सुखानुभूति र उपलब्धि पनि हासिल गरेका छौं । तसर्थः हाम्रो आन्दोलन समृद्ध र निष्ठाको आन्दोलन हो । हाम्रो आन्दोलनले देशभित्रका सफलता वा असफलता मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वामपन्थी आन्दोलन अथवा समाजवादी आन्दोलनका विभिन्न उतारचढावहरू तथा सफलता वा असफलताहरू पनि देखेको छ, त्यसको अनुभव पनि गरेको छ । हाम्रो आन्दोलनले कम्युनिष्ट आन्दोलनको मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनका सफलता वा असफलता सँगसँगै तीब्र गतिमा अगाडि बढिरहेको, तीब्र गतिमा परिवर्तन भइरहेको २० औं शताब्दी र २१औं शताब्दीका अनुभवहरू हासिल गरेको छ, विज्ञान प्रविधि, संचार र यातायातको अत्यन्त तीब्र विकासले समाजमा प्रभाव पारेको छ । त्यसले ल्याएको परिवर्तन तथा खोज अध्ययन र अनुसन्धानको सन्र्दभमा विज्ञानको क्षेत्रमा उठेका, उठाइएका कुराहरू र मानवजातीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू एवं त्यसले समाजमा पारेको असरहरूलाई अनुभव पनि गरेको छ । कला, संस्कृति, साहित्य लगायतका तमाम कुराहरूमा आएको परिवर्तन– यी सारा कुराहरू पनि हामीले अनुभव गरेका छौं ।
ड’रलाग्दो प्रचारयुद्ध – प्रचारआ’क्रमण- म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हाम्रा विरुद्ध प्रचारयुद्ध डरलाग्दो गरी छेडिएको छ । युद्ध होइन, प्रचार आक्रमण नै छेडिएको छ । युद्ध त दुई तीनवटा पक्षबीच हुन्छ, तर हामीले कुनै युद्ध गरेका छैनौं । यो हामीमाथिको आक्रमण मात्र हो । तर हामीले अनावश्यक वादविवाद गरेर होइन, हामी आफ्ना उपलब्धिहरूबाट, कामका परिणामहरूबाट र नतिजाहरूबाट जवाफ दिदैँ आएका छौं । अब पनि नतिजाहरूबाट हामी जवाफ दिन्छौं । हामी जवाफ दिनसक्ने गरी प्रगति र सफलताको ठाउँमा नै छौं ।
हाम्रो समाज शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्न सक्छ । नेपालको राजनीतिमा विभिन्नले विभिन्न समयमा हतियार उठाएको अनुभव छ । विभिन्न समयमा हतियार उठाइएको छ, जस्तोकि नेपाली कांग्रेसले २००७ सालमा उठायो, नेपाली कांग्रेसले २०२८र०२९ सालमा उठायो र अरु विभिन्न समयमा हतियार उठाएको हो । नेकपाले पनि विभिन्न समयमा हतियार उठायो । विभिन्न समूहहरूले पनि समय समयमा हतियार उठाए । तर, पछि निष्कर्षमा ती सबै शान्तिपूर्ण बाटोमा आइपुगेका छन् । तिनको सान्दर्भिकता वा अरु पक्षहरूमा बहस गर्न सकिएला । ती आफ्नो ठाउँमा कति आवश्यक वा कति अनावश्यक थिए भन्ने बहस हुनसक्छ । तर, मैले हिजो पनि पार्लियामेन्टमा बोल्दा अलिकति भनेको थिएँ, नेपालको राजनीति र नेपाली समाजको ट्रेण्ड अन्ततोगत्वा शान्तिपूर्ण बाटोमा वा संझौतामा नै आएको पाइन्छ । र, सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने तथा आधारभूत सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने बाटोमा नै आएको देख्न सकिन्छ ।
हाम्रो सम्बन्धमा प्रेस स्वतन्त्रताका बारेमा वा स्वतन्त्रता र मौलिक हकहरूको बारेमा प्रश्न उठ्नु वास्तवमा निरर्थक कुरा हो । जसका निम्ति हामीले यति लामो समयदेखि संघर्ष गरेका छौं, यति लामो समयदेखि लडेर आएका छौं र यसलाई हामीले आफ्नो विश्वासका रुपमा, आफ्नो आर्दशका रुपमा र मानव अधिकारको विषयलाई त अझ गम्भीरताका साथ नै अपनाएका छौं । त्यसकारण हामीले लोकतन्त्रलाई एउटा पूर्ण लोकतन्त्र ९कम्प्रिहेन्सिभ डेमोक्रेसी० का रुपमा अपनाएका छौं । पूर्ण लोकतन्त्र, जहाँ राजनीतिक अधिकारको मात्रै प्रश्न होइन, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकारहरू सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । समृद्धि मात्रै होइन, समानतासहितको समृद्धि हुन्छ । सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हुन्छ । हामीले यस किसिमको लोकतन्त्र र समृद्धिको पक्षपोषण गरेका छौं । यसमा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ ।
गरिबी त छ, तर भोकमरी छैन- हामीले अभ्यास गरिरहेको सम्पूर्ण लोकतन्त्रमा सामाजिक न्यायसहितको स्वतन्त्रता अथवा मौलिक हक अधिकारसहितको मानवीय हक अधिकारसम्म पहुँचका साथ सबैका लागि सुरक्षित रहने शान्तिपूर्ण समाज, सुशासनयुक्त समाज, आधुनिक समाज र सम्मानयुक्त समाज स्थापनामा जोड गरिरहेका छौै । जहाँ कोही पछाडि नपरोस्, कुनै क्षेत्र, कुनै वर्ग, कुनै तह, कुनै तप्का पनि पछाडि नपरोस् । यस हिसाबले हामीले भोकमरीको विरोध गरिरहँदा प्रतिव्यक्ति आय वा कूल राष्ट्रिय आय मात्रैको कुरा होइन । हरेक नागरिक कोही पनि भोको नपरोस् । यस हिसाबले एक ढंगले भन्ने हो भने नेपालमा भोकमरीको अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ भने पनि हुन्छ । अर्थात्, हामीले भनेका छौं नेपाल गरिब छ, गरिबी छ, तर भोकमरी छैन । किनभने कसैलाई भोको पर्न नदिने, कसैलाई भोकै मर्न नदिने नीति र प्रतिबद्धता हाम्रो सरकारले लिएको छ । हामीले सडकमा मानिस अलपत्र पर्न दिएका छैनौं । सडक मानव हुन दिएका छैनौं । सडक बालबालिकाको स्थितिको अन्त्य गरेका छौं । केही समययता हामीले सडक बालबालिका भन्ने जुन स्थिति थियो, त्यसको अहिले अन्त्य गरेका छौं । सडक मानवको अवस्था अन्त्य गरेका छौंं र कोही पनि भोकै पर्ने वा कसैले पनि खान नपाउने वा भोकले मर्ने स्थितिको अन्त्य गरेका छौं । वास्तवमा विश्व समुदाय यसमा खुशी हुनुपर्ने हो कि यति छोटो समयमा हामीले यसप्रकारको लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अगाडि बढाएका छौं ।
हामीले समृद्धि हासिल गरिसक्यौं, विकास गरिसक्यौं भन्ने होइन । हामी विकासको बाटोमा छौं । समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा छौं । हामी सुशासन कायम गर्ने बाटोमा छौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, अनियमितता रोक्ने र अन्त्य गर्ने बाटोमा छौं । यी सबै कुरा भइसके भन्ने होइन । हामीले बाटो बनाइसक्यौं, सबै क्षेत्रमा सबै काम गरिसक्यौं, अब हामी विकसित भइसक्यौं अथवा हाम्रा सम्पूर्ण पूर्वाधार र आधारहरू तयार भइसके भन्ने पनि होइन । तर, हाम्रा प्रयासहरू कतापट्टि केन्द्रित छन् त ?
भर्खर दुई वर्ष हुन लाग्यो । चुनावभन्दा पछि हाम्रो नेतृत्वमा यो सरकार बनेको दुई वर्ष हुन लाग्यो र यी दुई वर्षको बीचमा हामीले कुन बाटो लिएका छौं, कुन दिशा लिएका छौं र कुन गति लिएका छौं त ? यो आजको मुख्य प्रश्न हो ।
हामीले यस बर्ष सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष भनेका छौं । हिजो मैले संसदमा बोल्दा नेपाल भ्रमण वर्षको शुरुमा कोरोना भाइरसतिर संकेत गर्दै हाम्रो यस प्रयासमा अलिकति धक्का पर्न जाने लक्षण देखियो भन्ने कुरा बोलेको थिएँ । त्यसलाई पनि कसले कसरी बुझ्यो ? यो बेग्लै कुरा हो । कतिले त धक्का, कहाँको धक्का ? के को धक्का भन्ने ढंगले पनि कुरा गर्नु भयो ।
वैचारिक स्पष्टता – सफलताको खास आधार- वैचारिक प्रश्नमा एक ढंगको सक्रमणकालमा छौं । तर वैचारिक स्पष्टताबिना वा गन्तव्यको स्पष्टताबिना, कहाँ पुग्ने हो भन्ने कुराको स्पष्टताबिना र लक्षित ठाउँमा पुग्नका लागि कुन बाटो कसरी हिड्ने हो भन्ने स्पष्टताबिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौं र गन्तव्यमा पुग्न पनि सक्दैनौं । यो भनेको वैचारिक प्रश्नमा हाम्रो बहुतै स्पष्टता हुन जरुरी छ । म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, वैचारिक स्पष्टताका लागि अध्ययन गर्नु र आँखा खोलेर चल्नु आवश्यक हुन्छ । विगतसँग टाँसिएर होइन, अहिलेका यथार्थहरूसँग जोडिएर र भविष्यतर्फ उन्मुख भएर अर्थात् विश्लेषण गरेर अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ ? यसमा स्पष्ट हुनैपर्दछ । हामी ‘आइडोलोजिकल’ पूर्वाग्रहको चपेटामा पनि छौं । यस कुरालाई पनि बुझ्नु पर्छ र यसबाट हच्किने होइन, यसलाई हामीले आफ्नो व्यवहारद्वारा पराजित गर्नुपर्दछ । उचित तर्कहरूद्वारा पराजित गर्नुपर्दछ । र, हामी असफल हुने बाटो होइन, सफल हुने बाटो अवलम्बन गरेर स्पष्टताका साथ अघि बढ्नुपर्दछ ।
मैले भन्ने गरेको छु, भावनाले मात्र वा भावनामा बगेर क्रान्ति वा परिवर्तन हुँदैन र उपलब्धि पनि हासिल हुँदैन । यथार्थमा उभिएर, परिस्थितिअनुसार अगाडि बढेर र स्पष्ट भएर मात्रै हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं । त्यसकारण म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले कतिपय आकर्षक कुराहरू मात्रै गरेको होइन, ती आकर्षक कुराहरूका आधारमा निर्धारित गन्तव्यहरूमा कसरी पुग्नसक्छौं ? यद्यपि कहिले कहिले हामीलाई अलिकति क्रान्तिकारी कुरा गर्न मन लाग्ने होला । तर अहिलेको अवस्थामा ती कति व्यवहारिक छन् ? यसको हेक्का राखेर चल्नुपर्दछ । हामी आजको यथार्थमा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रो क्रान्तिको स्वरुपलाई बुझेर अगाडि बढ्न जरुरी हुन्छ । तदनुसारका हाम्रा नीतिहरू, तदनुसारका हाम्रो नीतिलाई बोक्ने खालका वा प्रतिनिधित्व गर्ने खालका अभिव्यक्तिहरू हुनुपर्दछ, जसले जनतालाई भ्रमित नबनाओस् र त्रसित पनि नबनाओस् । जनतालाई भ्रमित र त्रसित होइन, जनतालाई सचेत र स्पष्ट पारेर ढुक्कको स्थिति बनाएर, र आत्मविश्वास जगाएर अगाडि बढ्न प्रेरित गरोस् । यस प्रकारको नीतिका साथ हामी अगाडि बढ्न जरुरी रहेको छ ।
विश्वव्यापी सूचकहरूमा नेपालको प्रगति- यो सरकारले केही गरेन भन्ने कुराहरूको जुन हल्ला चल्ने गरेको छ, त्यस बारेमा म कमरेडहरूसाथ अलिकति केही समय लिएर केही झलक मात्रै प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु । हामीले कसरी काम गरेका छौं र विश्वका मानकहरू वा हाम्रा आफ्नै मानकहरूबाट उपलब्धि केकस्ता देखिएका छन् त रु सरकारले एउटा पनि काम गरेन भन्ने खालका जुन कुराहरू कहिलेकहिले विभिन्न पक्षहरूले उठाउने गरेका छन्, यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने खाँचो रहेको छ । यस किसिमले हाम्रा कतिपय साथीहरूले पनि बोलेको पाइन्छ । तसर्थः यहाँ मैले बोलेका कुराहरू केही दिनभित्रै पुस्तिकाका रुपमा कमरेडहरूसमक्ष पुर्‍याउँला । त्यसो भएपछि अरु थुप्रै कुराहरूमा स्पष्ट हुन सहयोग पुग्नेछ । अहिले संक्षिप्तमा भन्नुपर्दा विश्वका विभिन्न सूचकहरूमा नेपालको स्थिति के छ त ? कुनै पनि सूचकहरूमा नेपाल नकारात्मक अवस्थामा छैन । यसमा अगाडि बढेन र पछाडि पो सर्‍यो भन्नेजस्तो अवस्था अथवा अगाडिबाट पछाडि या तल झर्‍यो भन्ने एउटा पनि त्यस्तो सूचक उपलब्ध रहेको छैन । यस्ता हरेक सूचकहरूले हाम्रो प्रगति, अग्रगति र उपलब्धिको स्थिति नै देखाइरहेका छन् ।
म केही सूचकहरू मात्रै यहाँ भन्न चाहन्छु । जस्तो कि,विश्व बैंकको व्यवसायसम्बन्धी सूचाकाङ्क ‘डुइङ विजनेश इन्डेक्स’ ले नेपालको व्यवसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार भएको भन्ने देखाएको छ । गत वर्ष ११० औं स्थानमा रहेको नेपाल यस वर्ष ९४ औं स्थानमा उठेको छ । यो एक वर्षमा हामी विश्वस्तरमा नै १६ स्थान अगाडि बढेका छौं । मानव विकास सूचाकाङ्क, जो संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव विकास प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेको छ, त्यस सूचकांकमा नेपाल १४९ औंबाट १४७ औं स्थानमा अथवा २ स्थान अगाडि बढेको छ । विश्व भोकमरी सूचकांकमा अहिले नेपालको स्थिति सुध्रिएको छ र यो ७३ औं स्थान २ प्राप्तांकसहितमा रहेको छ । यसले पनि प्रगति र विकासको संकेत गरेको छ ।
शान्ति सुव्यवस्थाको स्थिति कस्तो छ त ? विश्व शान्ति सूचक ‘ग्लोबल पीस इन्डेक्स’ मा नेपालले यस बर्ष १२ बिन्दुले सुधार गरेको देखिएको छ, अर्थात् नेपाल यसरी सुधारको स्थितिमा अगाडि बढेको छ । १६५ देशमध्ये नेपाल ७६ औं स्थानमा आइपुगेको छ । जबकि अरु देशहरूको स्थिति फरक छ । बंगलादेश १०१ औं स्थान, चीन ११० औं स्थान, भारत १४१ औं स्थान र पाकिस्तान १५३ औं स्थानमा रहेका छन् । अथवा हाम्रो स्थिति भनेको यो धेरै अगाडि आएको स्थिति हो । यसलाई निकट भविष्यमा हामी अझ राम्रो अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छौं । योभन्दा धेरै राम्रो अवस्थामा पुर्‍याउन सक्छौं । केही टावर पड्काउने, केही ब्लास्ट गर्ने, केही मान्छेहरूलाई दुःख दिएर चन्दा असुली गर्ने, कर ‘ट्याक्स’ भन्ने नाममा यी सब क्रियाकलाप गर्ने कुराहरूलाई हामीले नियन्त्रण गर्दै आएका छौं । यस खाले समस्यालाई नियन्त्रण गरेपछि विद्यमान अवस्थामा अझ धेरै राम्रो सुधारको स्थिति आउँछ ।
विधिको शासनको सूचकमा नेपाल २ स्थान माथि उठेको छ । गत वर्षभन्दा यस बर्ष क्रमशः यो माथि जाँदै छ । विश्वका १२६ देशहरूमध्ये नेपाल ५९ औं स्थानमा रहेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितासम्बन्धी सूचकांक ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ मा नेपाल ११औं स्थान माथि चढेको छ र १२४ औं स्थानबाट ११३ औं स्थानमा पुगेको छ । विश्वव्यापी खुशी मापन सूचक ‘ह्याप्पीनेश इन्डेक्स’ मा के छ त ? खुशी मापनमा पनि नेपाल अहिले ३ स्थान माथि उठ्न सकेको छ । आर्थिक–सामाजिक कार्यसम्पादन र संस्थागत मूल्याङकनसम्बन्धी विश्व सूचक ‘कन्ट्री परफमेन्स एण्ड इन्सिच्यूशनल एसिसिमेन्ट–सीपीआइए’ मा हाम्रो मुलुक १ तह (३.४) बाट (३.५) माथि उठेको छ ।
विश्व प्रतिस्पर्धासम्बन्धी सूचकमा पनि १ स्थान (१०९ औं बाट १०८ स्थान) माथि उठेको छ । लैङ्गिक समानताको विश्व सूचकमा गत वर्षभन्दा १ स्थान माथि उठेको छ । गत वर्ष नै हामी अगाडि थियौं, त्यसमा पनि यस वर्ष अलिकति माथि उठेको अवस्था रहेको छ । विश्व भ्रमण तथा पर्यटनसम्बन्धी सूचक यसमा टुरिजम कम्पिटेटिभ इन्डेक्समा नेपाल फेरि १ स्थान माथि उठेको छ । यसरी विश्व सूचकहरूमा नेपाल अनेक कोणबाट अगाडि बढेको स्पष्ट छ । नेगेटिभ सूचकहरू छैनन् । यो हाम्रा निम्ति धेरै खुसीको कुरा हो, गर्वको कुरा हो कि जननिर्वाचित कम्युनिष्ट सरकारले कुनै पनि मानकलाई ‘माइनस’ वा नकारात्मक दिशामा जान दिइएको छैन । सबै सूचकहरूमा देशलाई सफलतापूर्वक नेतृत्व प्रदान गरेर ‘प्लस’मा अगाडि बढाएको छ ।
असाधारण उपलब्धिहरूको सामान्य सिंहावलोकन- गणतन्त्र स्थापना पछिको एक दशकमा लगातार ४ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि दर थियो । अहिले ३ वर्षयता ६.५ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक बृद्धि रहेको छ । गत वर्ष ७.१ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर थियो । र, यसपल्ट केही कुराहरूले धक्का दिए पनि हाम्रो आर्थिक बृद्धिदर नराम्रो छैन । हामीलाई फौजी किराले धक्का दियो, सुख्खाले धक्का दियो, गरिमा धानले धक्का दियो र अरु केही कुराहरूले पनि धक्का दियो । तर यस स्थितिले पनि हामीलाई धेरै नोक्सान पार्न सकेको छैन ।
हामीले प्रत्येक स्थानीय तहमा लगानी ग्राम वा औद्योगिक ग्रामको स्थापना गर्ने भनेका थियौं, जसअन्तर्गत ३२ वटा औद्योगिक ग्रामहरू स्थापना गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार घाटामा कमी आएको छ । पछिल्लो एक दशकमा वार्षिक औसत २०.४ प्रतिशतले बढेको व्यापार घाटा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ६.३ प्रतिशतले घटेको छ । व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्ययोजनाको कार्यान्वयन आन्तरिक उत्पादन बढाई वितरण प्रणालीमा गरिएको सुधार र उपयोग नगर्दा पनि हुने वस्तु एवं जनस्वास्थ्यमा हानी पुर्‍याउने वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइका कारण यस अवधिमा आयात ४.३ प्रतिशतले घटेको छ भने निर्यात २७ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यद्यपि अहिले पनि व्यापार साह्रै ठूलो असन्तुलनमा भएको हुनाले सन्तुलनमा आइसकेको छैन । तर, लक्षण कता गएको छ त भन्दाखेरि हामीले आयात घटाएका छौं र निर्यात बृद्धि गरेका छौं । निर्यात २७ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ भने आयात ४.३ प्रतिशतले घटेको छ । नेपालको व्यापारमा विविधिकरण पनि भएको छ । पहिले भारतबाट ६८ प्रतिशत र अरु देशबाट ३२ प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले ४० प्रतिशतभन्दा बढी अरु देशतिर र ६० प्रतिशत भारतबाट हुने गरी यसमा पनि सकारात्मक सुधार आएको सकारात्मक स्थिति बनेको छ ।
भुक्तानी सन्तुलन ६७ अर्ब ४० करोड घाटामा रहेकोमा यस बर्ष २७ अर्ब २९ करोडले वचतको स्थितिमा रहेको छ । उत्पादन र उत्पादकत्वमा बृद्धि भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५र०७६ मा कृषि उत्पादन ५ प्रतिशत, औद्योगिक उत्पादन ८.१ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको उत्पादन ७.३ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४र०७५ को तुलनामा धानको उत्पादन ८.९ प्रतिशतले, गहुँको उत्पादन ४.५ प्रतिशतले, मकैको उत्पादन ३.५ प्रतिशतले, तरकारीको उत्पादन १.९ प्रतिशतले, आलुको उत्पादन ४.३ प्रतिशतले र उखुको उत्पादन ११ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । यद्यपि उखु उत्पादनमा किसानहरूले पाउने सुविधामा फेरि पनि केही समस्या छन् भन्ने छँदैछ । सरकारले अनुदान (सब्सिडी) दिएको छ । धानको उत्पादनमा प्रतिहेक्टर लगभग ८ हजार सब्सिडी छ भने उखुको उत्पादनमा प्रतिहेक्टर लगभग २० हजारको सब्सिडी छ । यसरी अनुदानमा बढावा दिइएको छ । धानको समर्थन मूल्य दिइएको छ, उखुको समर्थन मूल्य दिइएको छ र उत्पादनमा बृद्धि पनि भएको छ । यो सकारात्मक स्थिति हो । काठको आयातमा २० प्रतिशतले कमी आएको छ । हामी आफ्नै देशको काठमा अलिक बढ्ता आत्मनिर्भर हुने दिशातर्फ र त्यसको सदुपयोग गर्ने दिशातर्फ अघि बढेका छौं ।
नवलपुरको धौवादीमा फलाम कम्पनीको स्थापना गरिएको छ । म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामीले थुप्रै युगान्तकारी कामहरू गरिराखेका छौं । त्यहाँको फलाम चिनियाँ प्रयोगशालामा गरिएको सफल परीक्षणबाट करिव ३० वर्ष प्रतिदिन ८ सय टन फलाम उत्पादन हुने संभावना देखिएको छ । र, अब त्यसको उत्पादनको काम हामी निकट भविष्यमै सुरु गर्छौं । त्यसका लागि फलाम कम्पनी लिमिटेड हामीले स्थापना गरिसकेका छौं । दैलेखमा पेट्रोलियम अन्वेषणको कार्य सुरु भएको छ । यी चिजहरू अगाडि बढ्नेबित्तिकै देशको अर्थतन्त्रमा स्वतः सकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ ।
पर्यटन आगमनको संख्या बढेको छ र यस बर्ष नोभेम्बरसम्ममा करिब २३ हजार बढेका छन् । र, कूल संख्या झण्डै १२ लाख पुगेको छ । यस बर्ष हामी २० लाख पर्यटक पुर्‍याउने गरी भिजिट नेपाल २०२० अभियान संचालन गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सानाठूला आयोजना तथा कार्यक्रमबाट करिब २२ लाख श्रम दिन बराबरको रोजगारी सिर्जना भएको छ । यसरी रोजगारीमा संलग्न व्यक्तिहरूको संख्या १ लाख ८५ हजार रहेको छ । हामीले पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा पनि ठूलो फड्को मारेका छौं । ‘केही भएन’ भन्ने जुन हल्ला छ, त्यस्तो होइन, बरु भएका कामहरूको प्रचार नभएको अवस्था हो । हामीले सरकारको तर्फबाट सम्प्रेषण गर्ने कुराहरूमा न्यूनता हुनसक्छ । तर काम नभएको भन्ने होइन । पूर्वाधारको क्षेत्रमा असाधारण कामहरू भएका छन् । यो सरकार गठन भएपछि प्रतिदिन करिब ५।७ किलोमिटरका दरले कालोपत्रे सडक निर्माण भइरहेको छ । केही वर्ष अगाडि वर्षभरिमा १० किलोमिटर मात्र सडक कालोपत्रे भएको अवस्थासमेत थियो । हामीसँग त्यस्ता वर्षहरू पनि थिए । तर, अहिले ५.७ किलोमिटरका दरले हरेक दिन सडक कालोपत्रे भएको उत्साहजनक प्रगति छ । र, यस अवधिमा कूल ३ हजार ६ सय ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । ३ हजार ५ सय ७९ किलोमिटर ग्राभेलस्तरको सडक निर्माण भएको छ र अहिले सिंगल लेनका होइन, प्रायः डबल लेन वा फोर लेनका सडकहरू बनेका छन् । वितेका दुई वर्षमा मात्रै ३ सय २५ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । यो ऐतिहासिक प्रगति हो । तर मान्छेले त आफ्नै अगाडिको एउटा पुल देख्ने भयो, सबै पुल एकै ठाउँमा त बनाएको हुँदैन । अनि के ठान्छ भने यही एउटा पुल त हो नि भन्ने ठान्दछ । देशभरिमा बनाएको एकसाथ त याद गर्दैन, चालू आर्थिक बर्षको ५ महिनामा मात्रै ४१ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई उच्च गति तथा क्षमताको ४ तथा ६ लेनको राजमार्गमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको छ । हामीले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न दाताको लगानीमा यो काम अघि बढाएका छौं । मसँग कुनकुन ठाउँमा ककसले लगानी गर्ने भनी एकीन र स्रोत सुनिश्चितताका रेकर्डहरू पनि छन्, तर मैले धेरै समय लिनु बाञ्छनीय नभएको हुनाले ती सबै विवरण यहाँ राखिरहन चाहन्नँ । कहाँ कहाँबाट के के सहयोग हुँदैछ भन्ने कुरा यहाँहरूले पछि थाहा पाउन सकिहाल्नु हुनेछ ।
नागढुंगा सुरुङ मार्ग निर्माणको प्रारम्भसँगै नेपाल सुरुङ मार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गरेको छ । यसरी एउटा नयाँ युगमा प्रवेश गरेको भन्दाखेरि मान्छेहरू अचम्मित हुने गरेका छन् । कतिपयले त नयाँ युग भनेको के हो भनेर दार्शनिक व्याख्या गर्नसमेत थालेकाछन् । हामी सुरुङ मार्ग निर्माणको युगमा प्रवेश गर्‍यौं । हामीले सुरुङ मार्ग बनाउन थाल्यौं । पहिले नेपालमा सुरुङ मार्ग थिएन, अब बनाउन थाल्यौं र नागढुंगा सुरुङ मार्ग प्रारम्भ भयो । हामीले त्यसको शिलान्यास गरी निर्माण कार्य थालिसक्यौं । अब थानकोट–चित्लाङ, खुर्कोट–चियाबारी, फेदीखोला–नयाँपुल र सिद्धबाबा ‘बुटवल’ मा सुरुङ मार्गको अध्ययन सुरु भएको छ । सिद्धबाबामा त १० अर्ब बजेट नै विनियोजन गरिसकिएकोे छ ।
यसै आर्थिक बर्षभित्र भारतको जयनगरदेखि नेपालको बिजलपुरासम्म नेपालको आफ्नै रेल संचालन हुनेगरी काम भइरहेको छ । पूर्व–पश्चिम, काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी, काठमाडौं मेट्रो र भारतीय सीमाबाट नेपालका महत्वपूर्ण औद्योगिक तथा व्यापारिक क्षेत्रहरू जोड्ने र चीनबाट काठमाडौं जोड्ने गरी रेलमार्ग निर्माण कार्यको अध्ययन सम्पन्न भएको छ । नेपाल पानी जहाज कार्यालयको स्थापना भएको छ । भारतले निर्माण गरेको आन्तरिक जलमार्गको प्रयोग गरी समुन्द्रसम्म पुग्न नेपालको आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज संचालन गर्नसक्ने गरी भारतसँग सहमति भइसकेको छ । हालै मात्र नारायणी नदीमा क्रूज संचालनको सफल परीक्षणसमेत भइसकेको छ ।
०७५ जेठ १ गतेदेखि नै मुलुकलाई लोडसेडिङ मुक्त गरिएको छ । कूल जनसंख्यामध्ये ८८ प्रतिशतको उपयोगमा विद्युत सेवा पुगेको छ । दुई वर्षको अवधिमा थप ८ लाख ५२ हजार घरधुरीमा विद्युत सेवाको पहुँच पुगेको छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत २४५ किलोवाट घण्टा पुगेको छ, जबकि दुई बर्षअघि हामी सरकारमा आउदा १४५ किलोवाट घण्टा थियो । नेपालको राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको जडित क्षमता १,३३७ मेगावाट पुगको छ । यस सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि निजी क्षेत्रबाट २२५ मेगावाट र वैकल्पिक ऊर्जामार्फत ८.५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएको छ । लामो समयदेखि समस्याग्रस्त रहेका माथिल्लो त्रिशुली थ्रि ‘ए’ र कुलेखानी तेस्रो आयोजना सरकारले विशेष पहल गरेर सम्पन्न गरेको छ । अहिले तिनीहरूबाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट ४५६ मेगावाट यसै बर्ष विद्युत उत्पादन गर्नेगरी निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइएको छ ।
नेपाल–भारत सीमादेखि भारतको गोरखपुरसम्मको १२० किलोमिटर लम्बाईको ४ सय केभी अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावरग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडको ५०–५० प्रतिशत सेयर पूँजी रहने गरी संयुक्त स्वामित्वको कम्पनी स्थापना गर्न दुई देशबीच सहमति भएको छ । र, नेपालको उत्पादित विद्युत भारत र बंगलादेश तथा अरुतिर पनि वितरण गर्नका लागि अगाडि बढाइएको छ । यस सम्बन्धमा हामीले बिमिस्टेकका बेला पनि यस प्रकारका अन्तरदेशीय ग्रिडहरूको विस्तार गर्ने कुरामा सहमति जनाएका थियौं । नेपाल र चीनबीच उर्जा सहमति र सहकार्यको सम्झौता सम्पन्न भएको छ । गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइन निर्माणका लागि सर्वेक्षण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र स्टेट ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेड चाइनाबीच सम्झदारीपत्र सम्पन्न भएर आ–आफ्नो भूभागमा पर्ने खण्डको अध्ययनसम्बन्धी कार्य सुरु गरिएको छ ।
विद्युत चुहावट २२.९ प्रतिशत रहेको थियो, २०७५र०७६ सम्ममा त्यसलाई १५.५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।
२०७५र०७६ को अन्त्यसम्ममा ६९ हजार ४ सय हेक्टर जमिनमा सिचाईं सेवा विस्तार गरिएको छ । म यहाँ थप विस्तारको कुरा गर्दैछु बोरिङ प्रविधिबाट नेपालमै पहिलोपटक भेरी–बबई ड्राइभर्सन आयोजनाको १२.२ किलोमिटर सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । विभिन्न नदीहरूको व्यवस्थापनबाट १ हजार ७० किलोमिटर तटबन्ध र सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत गरी नदी उकासबाट ११ हजार ९ सय ५३ हेक्टर जमिन निकालिएको छ ।
४० वर्षपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग पुनःनिर्माण गरिएको छ । त्यसबाट जुनसुकै विमान पनि उड्न र बस्न सक्नेगरी विमानस्थल व्यवस्थित भएको छ । धेरै ठाउँमा एयरपोर्टहरूको विकास गरिएको छ, विस्तार गरिएको छ र रात्री सेवाहरू अगाडि बढाइएको छ । यो कुरा विमानसेवाको प्रयोग गर्ने कमरेडहरूलाई थाहै छ । यस अवधिमा ५ वटा आन्तरिक विमानस्थलस् भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर र धनगढीका धावनमार्ग कालोपत्रे गरिएको छ र धेरैजसोमा रात्रीकालीन उडान र अवतरणको व्यवस्था मिलाइएको कुरा तपाईंहरूलाई थाहा नै छ । वितेका दुई वर्षमा तराई मधेसका २० जिल्लाहरूमा ४ सय ११ किलोमिटर ढल निर्माण गरिएको छ । संघीय संसद भवन ३ वर्षमा सक्नेगरी निर्माण प्रारम्भ गरिएको छ । ललितपुरको गोदावरीमा ३ हजार क्षमताको सभाहल आगामी चैतभित्र सक्नेगरी काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री निवास, प्रदेश प्रमुख र मुख्य मन्त्रीहरूका लागि आवास तथा सम्पर्क कार्यालयहरूको निर्माण कार्य तीब्रताका साथ भइरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न बन्चरे डाँडामा आधुनिक प्रविधियुक्त स्यानेटरी ल्याण्डफिल्ड साइट निर्माणको पहिलो चरणको काम आगामी चैतभित्र सक्नेगरी काम अगाडि बढेको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ८ हजार आवास इकाईहरू निर्माण गरिएका छन् ।
२०७५ चैत १७ गते राती आएको हावाहुरी र चक्रवातका कारण बारा र पर्सा जिल्लामा क्षति भएका ८ सय ६९ घरहरूको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी उपभोक्ताहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । कोलकातामा नेपालले आफ्नै कन्टेनर फ्रेट स्टेशन निर्माण गरी संचालनमा ल्याएको छ । लार्चाको सुख्खा बन्दरगाह संचालनमा आई भूकम्पपछि बन्द रहेको तातोपानी नाकाबाट व्यापारिक वस्तुको आयात–निर्यात हुन थालेको छ । र, तातोपानी नाका पनि खुलेको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी कार्य यसै आर्थिक बर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काममा तीब्रता दिइएको छ । बीचमा ठेकेदारले छाडेर हिड्ने वा भाग्ने आदि भएपनि फेरि अर्को बन्दोबस्त गरेर पनि यसै आर्थिक बर्षभित्र काठमाडौंमा पानी ल्याउने गरी प्रबन्ध गरिएको छ । काठमाडौंको गुहेश्वरीमा दैनिक ३ करोड २४ लाख लिटर क्षमताको अत्याधुनिक प्रशोधन प्रणालीसहितको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिएको छ । तुइन विस्थापन गर्ने भनेर हामीले भनेका थियौं र १२५ वटा तुइनहरू झोलुङ्गे पुल र पुलहरूद्वारा बिस्थापित भएका छन् । जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, प्रसुुति स्वास्थ्य केन्द्रआदि गरेर यस अवधिमा २२८ वटा भवनहरूको निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणअन्तर्गत वर्तमान सरकार गठन हुनुपूर्व ९७ हजार ८ सय १३ निजी आवासको निर्माण सम्पन्न भएकोमा अहिले ४ लाख ८२ हजार ३ सय २३ निजी आवास सम्पन्न भइसकेका छन् ।
अहिलेको सरकार गठन हुनुपूर्व जोखिमयुक्त वस्तीमा रहेका ४ हजार ८ सय २९ जना लाभग्राहीहरूमध्ये जम्मा ४ जना लाभग्राही मात्रलाई २ लाख रकम दिइएकोमा अहिले २ हजार ७ सय ९४ लाभग्राहीले त्यस्तो लाभ प्राप्त गरेका छन् । पुनःनिर्माण प्राधिकरणको तर्फबाट पुनःनिर्माणका कामहरूमा व्यापक तीब्रता दिइएको छ । यसको लामो फेहरिस्त म यहाँ भनिरहन त्यति आवश्यक ठान्दिनँ । किनभने यसमा हामीले असाधारण ढंगले प्रगति गरेका छौं । भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लाका क्षति भएका ७ सय ५३ पुरातात्विक सम्पदाहरूमध्ये पहिला ८० वटाको पुनःनिर्माण भएकोमा हाल ३८७ सम्पदाहरूको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ ।
सुरक्षा निकायका ३८३ भवनहरूमध्ये ४४ को मात्रै काम सम्पन्न भएको थियो । अहिले १९४ को काम सम्पन्न भइसकेको छ । यो सरकार बनेपछि सुरु गरिएको धरहराको पुनःनिर्माण साथीहरूले बाटोमा हिंड्दा देख्न सक्नुहुन्छ, आज छैठौं तल्ला ढलान भएको छ । जमिन मुनीको काम सकेर माथि छैठौं तल्लाको ढलान गरिसकिएको छ । त्यो बाहिरबाटै आँखाले देख्न सकिनेगरी नै प्रगति भएको भन्नुपर्छ , रानीपोखरीको निर्माण कार्य मुख्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । अब छिट्टै त्यसलाई उद्घाटनको बिन्दुमा पुर्‍याइनेछ । शैक्षिक बर्ष २०७५र०७६ मा २ लाख ७० हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना अभियानअन्तर्गत भर्ना गरिएको छ ।
जहिले पनि विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक समयमा पुगेन भन्ने जुन गुनासो थियो, त्यस स्थितिलाई समाप्त पारिएको छ । ५९ लाख १० हजार बालबालिकाहरूलाई समयमै सबै ठाउँमा निःशुल्क पुस्तकहरू पुर्‍याइएको छ । ६ सय ७ स्थानीय तहहरूमा विगत दुई वर्षमा थप ३२ हजार ३ सय ७० विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा उपलब्ध गराइएको छ । नेपाली वैज्ञानिकहरूले विकास गरेको ‘न्यानो स्याटलाइट’ यसै अवधिमा अन्तरिक्षमा छाडिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ४९ जिल्लाका ४ सय ८० स्थानीय तहमा विस्तार गरेर २५ लाख नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लिभर ट्रान्सप्लान्ट गर्न सुरु गरिएको छ । श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले बृद्धि गरिएको छ । कर्मचारीको पारिश्रमिक २० र १८ प्रतिशतले बृद्धि गरेको मैले स्मरण गराइरहनु पर्लाजस्तो लाग्दैन । डिजिटल फ्रेमवर्क अन्तरगत हामीले थुप्रै कामहरू गरेका छौं, जसको म धेरै फेहरिस्तमा जान चाहन्नँ । पहिले ७ वटा मुलुकसँग श्रम सम्झौता थियो, अहिले थप ४ वटा मुलुकसँग गरिएको छ । बेरोजगारहरूका लागि १ सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत सीप विकास, उद्यमशीलता विकास र वित्तीय पहूँचमार्फत ३ हजार ३ सय ५८ महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणमा सहयोग गरिएको छ । युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषमार्फत् २७ हजार ४ सय २० जनालाई स्वरोजगार बनाइएको छ । बितेको दुई वर्षको अवधिमा उपत्यकाबाट मात्रै १ हजार २ सय सडक बालबालिकाको उद्दार गरिएको छ । र, उनीहरूको पारिवारिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापना गरिएको छ । काठमाडौंका विभिन्न स्थानहरूबाट २ सय ६९ जना बेसहारा व्यक्तिहरूको उद्दार तथा पुनःस्थापना गरिएको छ ।
प्रगति हुन थालेपछि एक ठाउँ मात्रै होइन, त्यसको झलक धेरैतिर देखिन्छ र फैलिन्छ । खेलकूदमा पनि देखियो– १२औं साग खेलकूदमा ३ वटा स्वर्ण पदक ल्याएको नेपालले अहिले १३ औं सागमा ५१ वटा स्वर्ण पदक ल्यायो, जम्मा २ सय ७ वटा पदक हासिल गर्‍यो र भारत पछिको दोस्रो स्थानमा आफूलाई उभ्याउन सफल भयो । अहिलेको सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि ७ हजार मुक्त हलिया परिवारहरूलाई पुनःस्थापना गरिएकोमा अहिलेको यस छोटो अवधिमा थप ७ हजार ६० मुक्त हलिया परिवारलाई पुनःस्थापना गरिएको छ । हामीले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष अभियान भनेका छौं, यसलाई अभियानका रुपमा कार्यान्वयनमा अघि बढाएका छौं । द्वन्द्वरत पक्षहरूसँग राजनीतिक वार्ता गरेर न्यूनीकरण गरिएको छ, पृथकतावाद समाप्त गरिएको छ । सीके राउतहरूलाई पृथकतावादको बाटो छोडाएर मूलधारको राजनीतिमा ल्याइएको छ र अरुअरुसँग पनि वार्ता गरिएको छ । जो सहमत हुँदैन, उसलाई कानून कार्यान्वयनको माध्यमबाट मूलधारमा ल्याउने गरिएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न १८ वटा नमूना कानून निर्माण गरेर उपलब्ध गराइएको छ । वित्तीय संघीयता छोटो समयमै कार्यान्वयन गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई गत बर्षको तुलनामा यस आर्थिक बर्षमा रु २ अर्ब ४० करोडसमेत थप गरी रु ३ खर्ब ४१ अर्ब २९ करोड स्रोत हस्तान्तरण गरिएको छ । यसै आर्थिक बर्षदेखि प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई अतिरिक्त स्रोतका रुपमा रोयल्टी बाँडफाँटअन्तर्गत रु २ अर्ब ४६ करोड ८० लाख हस्तान्तरण गरिएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहहरूमध्ये अब ८ स्थानीय तहबाहेक ७ सय ४५ वटा सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखाहरू पुर्‍याइएको छ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवोर्क कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । देशका ६६ जिल्लामा फोरजी सेवा संचालनमा आइसकेको छ । प्रहरीको भौतिक उपस्थिति दर १३.२५ प्रतिशतले बृद्धि गरेर भयरहित वातावरण सिर्जना गर्ने कोसिस गरिएको छ । नेपालमा शान्ति सुरक्षाको स्थिति सुधारोन्मुख रहेको छ । ग्लोबल इन्डेक्सले पनि यसलाई स्पष्ट भनेको छ र मानेको छ ।
भ्र’ष्टा’चार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय सफलता-वितेका दुई वर्षमा राजश्व चुहावटको कसूरमा हामीले भ्र’ष्टाचा’र नियन्त्रण गर्नेतर्फ कसरी काम गरेका छौं ? यसलाई धेरै नै उल्लेखनीय मान्नुपर्छ । दुई वर्षमा चुहावटको कसूरमा कर्मचारीसहित ४ सय ८९ जना विरुद्ध १४ अर्ब ४६ करोड ९४ लाख रुपियाँ बिगो दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । विनिमय अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारको कसूरमा ३ सय ६ जना विरुद्ध ४ अर्ब ८६ करोड ५ लाख रुपियाँ बिगो दाबी गरी अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ । झुठा तथा नक्कली बिल जारी गर्ने विभिन्न फर्महरूलाई रु ६ अर्ब ७५ करोडभन्दा बढीको बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ । पुराना समेत मुद्दाहरू, पुराना समेत अपराधहरू, तिनीहरूलाई अहिले कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । सरकारी सम्पति फिर्ता ल्याउने एउटा अभियान नै सरकारले चलाएको छ । विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमित सरकारी जमिनहरू फिर्ता लिने अभियान नै चलाइएको छ ।
सन्तुलित विदेश सम्बन्धमा नयाँ आयाम- हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका, पहिचान, परिचय र प्रभाव विस्तार गरेका छौं । अहिले १२ वटा मुलुकसँग थप सम्बन्ध विकास गरेर १ सय ६८ देशहरूसँग पुगेको छ ।थप १५ वटा मुलुकहरूसँग दुईपक्षीय परामर्शका संयन्त्र स्थापना भएका छन् ।
मैले भनिरहनु पर्लाजस्तो लाग्दैन, नेपालसँग सम्बन्ध विस्तार र सुदृढीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगतको अभिरुचि बढेको छ । यो टड्कारो रूपमा देखिएको छ । मैले बेलायत र फ्रान्सको भ्रमण दुई दशकपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको हुँ । परराष्ट्र मन्त्रीले १७ वर्षपछि अमेरिका र १४ वर्षपछि रुस भ्रमण भएको छ । चीनका राष्ट्रपतिको तहमा २३ वर्षपछि भ्रमण सम्पन्न भएको छ । भारतका प्रधानमन्त्रीको एउटै कार्यकालमा ४ पटक नेपाल भ्रमण भएको छ ।
लिम्पियाधुरा हाम्रो हो- भारत सरकारले २ नोभेम्वर २०१९ मा नेपाली भू–भाग आफ्नोमा पारेर प्रकाशित गरेको नयाँ राजनीतिक नक्सा सुगौली सन्धिको धारा ५ को विरुद्धमा रहेकाले नेपाल सरकारले सो नक्सामा असहमति व्यक्त गर्दै तुरुन्त सच्याउन भारत सरकारलाई २०७६ मंसिर ४ गते पत्राचार गरेको छ । यसरी पहिलो पटक नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भनेर आधिकारिक रूपमा पत्राचार गरेको छ । यसभन्दा अगाडि लिम्पियाधुरा पनि हाम्रो हो भनेर कुनै सरकारले भनेका थिएनन् । त्यसरी कुनै पत्राचार पनि गरेका थिएनन्, दावी प्रस्तुत गरेका पनि थिएनन् ।
अहिले हामीले भारतसँग संवादको माध्यमबाट यस समस्याको समाधान गरौं र हाम्रा दाबी प्रमाणहरू यस्ता छन्, जसबाट यो हाम्रो भूभाग हो भन्ने देखिन्छ भन्ने कुरा गरका छौं । यसमा म अहिले धेरै लामो जान चाहन्नँ, किनभने यो कुरा मैले अर्कोपटक संसदमा पनि बोल्नुछ । म संसदमा बोल्दाखेरी यसको विषयमा अझ सविस्तार बोल्नेछु । त्यसैले यहाँ धेरै समय लिन्नँ । प्रमाणहरूले लिपुलेक, कालापानी र त्यति मात्रै होइन कि लिम्पियाधुराको भू–भागसमेत हाम्रो रहेको देखाउँछन् । र, ती तथ्य, प्रमाणहरूको आधारमा हामीले दाबी प्रस्तुत गरेका छौं । हामीले तदनुरुप संवाद अगाडि बढाएका छौं । हामीले पत्राचार गरेका छौं, हामीले केही पहलहरू प्रारम्भ पनि गरेका छौं । र, म के विश्वास गर्छु भने संवादको माध्यमबाट हामी यस विवादको समाधान गर्न सक्छौं । हामीले यसै गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
सीमा समस्या र सीमा सुरक्षा- हामीले सीमा सुरक्षामा पनि विशेष ध्यान दिएका छौं । पहिले सीमा सुरक्षाका इकाईको औसत दुरी १८ किलोमिटर थियो भने अहिले त्यसलाई ८ किलोमिटरमा झारेका छौं । थप १ सय १४ वटा सीमा सुरक्षा चौकीहरू स्थापना गर्ने कार्यलाई अगाडि बढाएका छौं । थप १ हजार ६ सय ४ वटा नयाँ सीमास्तम्भ निर्माण गरेर हालसम्म २ हजार ३५ वटा नयाँ सीमास्तम्भ निर्माण सम्पन्न गरिएको छ । थप १ हजार ३ सय ११ सीमास्तम्भ मर्मतसंभार गरेर जम्मा १ हजार ४ सय ९८ सीमास्तम्भ मर्मतसंभार गरिएका छन् ।चीनका ४ वटा सामुन्द्रिक बन्दरगाह तियान्जिन, सेन्जेन, लियान्युगाङ र झ्याङजियाङ र तीनवटा सुख्खा बन्दरगाह लान्झाओ, ल्हासा र सिगात्से प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा चीन सरकारसँग सम्झौता भएको छ । यसरी राष्ट्रियताको सवाल, लोकतन्त्रको सवाल, विकास निर्माणको सवाल, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको र सीमा सुरक्षाको सवालमा हामी कसरी अगाडि जाँदैछौं भन्ने कुराहरू मैले कमरेडहरूसमक्ष राख्न चाहेको हुँ । र, केही संक्षिप्तमा यहाँ राखेको छु ।
सत्यका लागि लड्ने देशभक्त सरकार- हामी यस ढंगले चौतर्फी रुपमा अगाडि बढिरहेका छौं । तर केही केही अन्योलपूर्ण कुराहरू, केही केही भ्रमपूर्ण कुराहरू, केही केही अध्ययनको कमीका कुराहरू, केही केही विभिन्न कारणहरू रहेका हुन सक्छन् । अनि कतिपय भ्रमपूर्ण कुराहरू पनि आउने गरेका छन् । मैले सीमाको सम्बन्धमा भनेँ – सीमा विवाद छ, विभिन्न ठाउँमा छ, सुस्तामा छ र कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, यी ठाउँहरूमा छ । मैले संक्षिप्तमा भनेँ हामी वार्ताबाट र भारत सरकारसँग कुरा गरेर समस्याको समाधान गर्न सक्छौं भन्ने मेरो विश्वास छ । हामीले त्यही प्रयास अगाडि बढाइराखेका छौं । कमरेडहरूले यसमा सरकारले कुनै प्रकारले राष्ट्रिय हितलाई बेवास्ता गर्ने वा कम मूल्याङकन गर्ने अथवा अरु केही गर्छ कि भन्ने नठान्नु भए हुन्छ । यो सरकार देशभक्त सरकार हो । यो सरकार राष्ट्रवादी सरकार हो । यो सरकार सत्यमा विश्वास गर्ने र सत्यका लागि लड्ने सरकार हो । सत्यका लागि बोल्न नडराउने, बोल्न आँट गर्ने सरकार हो । जोसुकैसँग पनि सार्वभौम समानताका आधारमा कुरा गर्नसक्ने सरकार हो । कुनै प्रकारको हीनताबोध राख्ने वा कुरा गर्न नसक्ने त्यस्ता कुनै प्रकारका अनुचित मनोग्रन्थीहरूबाट यो सरकार ग्रस्त छैन । म साथीहरूलाई यसमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।
एमसीसी कम्प्याक्ट–अप्ठेरो केही छैन– एउटा अर्को प्रश्न हाम्रो अगाडि आएको छ, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जसलाई एमसीसी भन्ने गरिएको छ । यसको धेरै लामो इतिहासमा म जान्नँ । यो सन् २००४ मा स्थापना भएको अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो । यस मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका शर्तहरू कमरेडहरूले सुन्नुभए हुन्छस् सुशासन, जनतामा लगानी र आर्थिक स्वतन्त्रता लगायतका निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरेर आर्थिक बृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँदै गरिबी घटाउन अनुदान सहायता गर्ने कार्यक्रम हो यो ।
त्यसै सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन डलर ९करिब ५५ अर्ब रुपियाँ० अनुदानस्वरुप नेपाललाई उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारले १३० मिलियन ९करिब १४ अर्ब रुपियाँ० बराबर रकम विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो रकमचाहिँ ऊर्जा र यातायातको क्षेत्रमा विकासका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने उल्लेख रहेको थियो । यसमा सैनिक प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नपाइने, सुरक्षा निकायमा खर्च हुन नसक्ने, हात हतियारमा खर्च हुन नसक्नेजस्ता कुराहरू थिए । यो रकम विकासमा मात्रै खर्च गर्न पाउनेगरी सम्झौता भएको थियो ।
यस बुँदामा साथीहरूले अलिकति विवाद गर्न खोज्नुभएको छ । यसमा खासै विरोध गर्नुपर्ने कारण छैन । यसबाट अप्ठेरो पनि केही पर्ने छैन । यसका सर्तहरू जो कार्यान्वयनमा अघि बढेका छन् । विद्युत प्रशारण लाइन परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, जुन भइसकेको छ । विद्युत नियमन आयोग ऐन र यसको गठन गर्नुपर्ने थियो, यो पनि पूरा भइसकेको छ । प्रोग्राम इम्प्लिमेन्टेसनमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने काम पनि पूरा भइसकेको छ । कानून मन्त्रालयबाट कानूनको मस्यौदामा राय दिनुपर्ने, यो पनि पूरा भएको छ । नेपाल–भारत बीच बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा भारत सरकारको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको थियो ९प्रशारण लाइन नेपालले भारतको सिमानासम्म पुर्‍याउने अनि सिमानामा गएर त्यत्रो ४०० केभीको हाइटेन्सन लाइन उतापट्टि केही नहुने हो भने त यो त्यहाँ बनाउनुको कुनै अर्थ हुदैनथ्यो । त्यसकारण यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन थाल्नुभन्दा अगाडि भारतसँग पनि सहमति हुनुपर्छ भन्ने कुरा थियो० । यसमा नेपाल सरकारले भारतसँग कुरा गरेर सहमति भइसकेको छ । निर्माणस्थल सम्मको पहुँच, जग्गा प्राप्ति र बन कटान भएको हुनुपर्ने भन्ने बुँदा थियो । यो काम क्रमशः भइरहेको छ । यसमा व्यवधानको विषय खासै भएन । अनि कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अगाडि संसदबाट कम्प्याक्टको अनुमोदन हुनुपर्ने भन्ने छ, यो प्रक्रियामा छ । यसअघि नै अनुमोदन हुनुपथ्र्यो । सो नहुँदा अनावश्यक ढंगले विवाद पनि भयो र खर्च पनि हामीले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । यसको लामो सिलसिला छ । अहिले म त्यतापट्टि जान चाहन्नँ ।
त्यस्तो कम्प्याक्ट एग्रिमेन्ट अहिलेसम्म ४९ वटा देशहरूसँग भइसकेको छ । एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका देशहरूसँग भएको छ । यसलाई इण्डो–प्यासिफिकसँग जोड्नु बेकारको कुरा हो । किनकि ल्याटिन अमेरिका इण्डो प्यासिफिकसँग जोडिने विषय होइन । कुन देशका के ‘हिडन इन्ट्रेस्ट’ ९निहित स्वार्थ० छन् भन्ने कुराको खोजीमा हामी जानुपर्ने त्यस्तो जरुरी होइन । त्यसो गर्दा त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध नै राख्न सक्दैनौं ।
विश्वमा विभिन्न खालका विचारधारा, राजनीतिक प्रणाली, सामाजिक आर्थिक प्रणालीहरू भएका र विभिन्न क्षेत्रीय र ‘ग्लोबल इन्ट्रेस्ट’ भएका देशहरू हुन सक्छन् र छन् । तर, हामी अरुका ‘इन्ट्रेस्ट’ को पछाडि लाग्दैनौं । हाम्रो प्राथमिकता, आवश्यकता र लाभका निम्ति सहयोग, अनुदान र ऋण जे पनि ग्रहण गर्ने र परिचालन गर्ने हो । त्यसकारण यसमा अरुका के ‘इन्ट्रेस्ट’ छन् भनेर हामी त्यतापट्टि जाँदैनौं । के ‘इन्ट्रेस्ट’ होलान् भनेर त्यसको विश्लेषणमा गएर केही अर्थ पनि छैन । हामीलाई के लाभ हुन्छ र हामी कस्तो सहमतिमा जान सक्छौं रु खासमा हामीले त्यसैलाई हेर्ने हो ।
म भ्र’ष्टाचा’र गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँँ
अब म एउटा कुरामा अलिकति मात्र स्पष्ट गर्न चाहन्छु । यो यती होल्डिङस्को विषय रहेको छ । मानिलिऔं, हाम्रो कुनै एकदम घनिष्ट साइनो हो कि मितेरी साइनो नै हो कि, केही हो कि भने जसरी यती होल्डिङस्को बारेमा व्याख्या हुने गरेको छ ।
१२ वर्ष अगाडिको कोङ्दे भन्ने रिसोर्ट रहेछ, त्यसलाई अहिले जोडेर प्रचारमा ल्याइएको छ । पछि शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा सरकार हुँदा सायद माओवादी पनि सरकारमा थियो कि रु त्यतिबेला कालीमाटीको जमिन लिजमा दिइएको रहेछ । अहिले यसको चर्चा चलेपछि हामीले पल्टाएर हेर्‍यौं, कहिले दिएको रहेछ, के रहेछ रु यसरी हेर्दा शेरबहादुरजीका पालामा दिएको रहेछ भन्ने स्पष्ट छ । प्रक्रिया पुर्‍याएको छ कि छैन भनेर हेर्दा प्रक्रिया पुर्‍याएर विधिवत रुपमा नै दिइएको रहेछ । विरोध गर्नुपर्ने तरिकाले होइन । नारायणहिटी अगाडिको जमिन व्यापारिक प्रयोजनमा दिनु हुन्थ्यो कि हुन्नथ्यो रु त्यो अर्के विषय होला । तर, सरकारले दिने नीति लिएर दियो, त्यो पनि अहिलेको सरकार बनेपछि होइन । योभन्दा अगाडिको सरकारले दिएको हो ।
अनि भनिएको छ– ६ अर्ब कि कति लिज पर्ने एक अर्ब कतिमा दियो रे १ साधारणतया जमिनकै मूल्य हेर्दा पनि त्यो अवस्था होइन र जुन मूल्याङ्कन गरेको छ, सबै त्यसमा उल्लेख नै गरेको छ । एउटा लेख्ने मान्छेले एक अर्ब ४० करोड लेख्नुपर्ने ठाउँमा ६ अर्ब भन्ने शब्द असावधानी वा नियतवश लेखेको रहेछ । पछि त्यसमा यस्तो होइन भनेपछि सच्याएर लिजमा दिइएको रहेछ त्यतिबेला । त्यहाँ एक रोपनी या यस्तै जमिन होला, जसको मूल्य पनि त्यति अर्ब पर्दैन । आनाको कति पर्छ ? त्यति मूल्य पनि नपर्ने ठाउँमा लिजको कुरा भूलचुकले एउटा अंक लेखिएकोमा त्यसलाई अहिलेको सरकारको विषय बनाएर हल्ला गर्ने ? योअघिल्लो सरकारको समयको कुरा हो । अहिलेको सरकारलाई आरोपित गर्ने गरिएको छ, यो अनुचित र गलत छ ।
अहिले गोकर्ण रिसोर्टको कुरा आएको छ । गोकर्ण रिसोर्ट उहिले दरबारले विदेशीलाई लिजमा दिएको थियो । विदेशीबाट नेपालीले लिएको हो । अब हाम्रो भनाइ के त गोकर्ण रिसोर्टबारे ? लहैलहैमा लागेर कुनै एउटा ब्ल्याकमेलरले ब्ल्याकमेल गर्न पाएन भन्दैमा हामी त्यसका पछाडि जान्छौं ? गोकर्ण रिसोर्ट के बन्द गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ? नेपालीले चलाउन पाउँदैन भन्ने हो ? हिजो द्वन्द्वकालमा मैले राम्ररी चलाउन सकिनँ भनेर विदेशीले म नेपालीलाई यो बेच्छु भन्यो, अनि नेपालीले किन्यो ।
अब त्यसको अवधि नसकिंदै किन दिनुपर्छ भन्दा त्यसले गर्ने थप लगानीको तयारी त गर्नुपर्‍यो नि । अन्यथा तयारी गर्दासम्म भत्किसक्यो र उसले फेरि पाउँदैन भने लगानी किन गर्छ ? कि हामीले बन्द गर्ने नीतिमा जानुपर्‍यो । हामीले यसमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य कायम गरेर भनेका छौं, हामीलाई पक्ष–विपक्ष केही गर्नु छैन । हामीले उसको निववेदन हेर्‍यौं र स्वतन्त्र निकायहरू र स्वतन्त्र मूल्याङ्कनकर्ताहरूबाट मूल्याङ्कन गराएर त्यस आधारमा हामीले उसलाई लिजमा दियौं । यसमा प्रतिस्पर्धी विधि अपनाइएन भन्ने होइन । यसकारण यसमा कुन व्यापारीलाई के परेको छ वा कुन ब्ल्याकमेलरलाई के परेको छ ? त्यसका पछाडि हामी कुद्ने होइन । हामीले निष्पक्ष ढंगले नै सबै कुरा हेर्ने हो ।
म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले कुनै गल्ती गरेको छैन । सरकारलाई गल्ती गर्नु पनि छैन । म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, अहिलेको सरकार कुनै भ्रष्टाचारका पछाडि र पैसाका पछाडि कुद्दैन । मैले भनेको छु– म भ्र’ष्टाचा’र गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ ।
मैले अहिले यहाँ केही विवरणहरू, तथ्य र तथ्याङ्कहरू प्रस्तुत गरेँ । नेपालको इतिहासमा पहिले कहिल्यैभन्दा अहिले हामीसँग अनुकूल वातावरण छ । किनभने हामीसँग लगभग दुईतिहाइको सरकार छ । हामी मजबुत पोजिसनमा छौं । हामी निर्णय गरेर दृढताका साथ अगाडि बढ्न सक्छौं । यस्तो अवसरमा हामी उद्योगहरूको स्थापना, संरक्षण र पुराना रुग्ण उद्योगहरूको पुनस्र्थापना जे सम्भव छ, त्यही गरेर नयाँ उद्योगहरूको स्थापना गर्न लाग्नैपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्नेपर्छ । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायिकीकरण र कृषिआधारित उद्योगहरूको स्थापना गर्नुपर्छ । खेतजमिन बाँझो छोडेर बेरोजगार भएँ भन्दै विदेश जाने परिपाटी रोकेर मान्छेहरूलाई यहाँ काम गर्न सकिन्छ, हाम्रा यति जमिन, यस्ता जमिन छन्, यस्ता खोलानाला छन्, यस्तो प्रकृति छ, हामी गर्न सक्छौं भन्ने गर्न थालेका छौं । हामीले यहाँ खाली प्रकृतिमा रहेको संभावना ९पोटेन्सियल० मा मानवीय शक्ति ९पोटेन्सियल० लाई मिसाएर विकासको एउटा लहर अगाडि बढाउनुछ ।
हाम्रो देशको जनसंख्यालाई धान्ने मात्रै होइन, काम पनि गर्नसक्ने र उत्पादन पनि पर्याप्त दिनसक्ने गरी हाम्रो जमिन छ, हाम्रो भूमि छ । आज प्राप्त विज्ञान प्रविधिको यसमा उपयोग गरेर हामी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सक्छौ । नयाँ ढंगले विकास गर्नसक्छौं । हाम्रो ठूलो सम्भावना निर्यातमा छ, त्यतापट्टि हामी ठूलो प्रगति गर्नसक्छौ । अहिले हामी यत्तिकै हिँडिराखेका छैनौ । स्पष्ट दृष्टिकोणसहित हिँडेका छौं । यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि अब कुनै द्विविधा राख्न जरुरी छैन । हामी स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ, नीतिका साथ, योजनाका साथ र कार्यक्रमका साथ अगाडि बढेका छौं र उपलब्धि हासिल गर्दै अगाडि बढेका छौ । उपलब्धिहरू अझ हासिल गर्छौं । अब ३ वर्षभित्र आधारभूत रुपमा नेपाललाई गरिबी नभएको, निरक्षरता नभएको, अन्धकार नभएको बिजुलीयुक्त, उज्यालो र एक ढंगले भन्ने हो भने एउटा नयाँ चरणको उचाइमा हामी माथि उठाउन सक्छौं । हामीले यसो भनेका मात्र छैनौ, हामीले जुन कामहरू गर्दैछौं, त्यसबाट परिणामहरू हासिल हुन थालेका छन् ।
अहिले नेपाल तीब्र आर्थिक बृद्धि गर्ने १० वटा देशभित्र पर्‍यो भनेर मूल्याङ्कन भएको छ । यो साँचो हो, हामी तीब्र आर्थिक वृद्धिमा पर्ने १० वटा देशमध्ये पहिलो नम्बरमा पनि हुन सक्छौं । हामीले त्यसका केही आधारहरू तयार गरिरहेका छौं, हामी पहिलो नम्बरमा पर्न सक्छौं । किनभने हामी अब खानीतिर, पेट्रोलियमतिर, अरुतिर र ऊर्जाको व्यापारतिर बल्ल जान खोज्दै छौं । अब यस आर्थिक वर्षभित्र ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रमा हामी बल्ल आत्मनिर्भर हुन्छौं । माथिल्लो तामाकोशी आएपछि आत्मनिर्भर हुन्छौं । त्यसपछि अरु विद्युत उत्पादनका कामहरूबाट हाम्रो निर्यात क्षमता बढ्छ । जब हामी ऊर्जा निर्यात गर्न थाल्छौं, जब हामी फलाम निर्यात गर्न थाल्छौं, जब हामी अरु यस्ता अटो मोबाइल्स् आदिका फ्याक्ट्रीहरू स्थापना गर्न थाल्दछौं, जब हामी पेट्रोलियम उत्खनन् गर्न थाल्छौं ९मलाई जहाँसम्म विश्वास छ, हामी पेट्रोलियम प्राप्त गर्न सक्छौं० । त्यसबाट हामीले अर्को तहमा आर्थिक फड्को मार्न सक्छौं ।
जलस्रोत र कृषि उपज हामी जो बाहिर निर्यात गर्न सक्छौं, त्यो असाधारण कुरा हुनेछ । किनभने हामी पहाडी भेगमा थुप्रै कामहरू गर्न सक्छौं, अर्गानिक कृषि पहाडी भेगमा गर्न सक्छौं, त्यसले पशुपालनमा मिल्क डेरी प्रोडक्सनदेखि लिएर अनेक कुरामा, वातावरणदेखि अनेक कुरामा सकरात्मक प्रभाव पार्दछ । हाम्रो ‘कार्बन ट्रेड’ को क्षेत्रबाट हुने लाभ पनि बढ्न सक्दछ । यस्ता थुप्रै ठाउँहरू छन्, जसबाट हामी व्यापार असन्तुलनलाई हटाउन सक्छौं, आत्मनिर्भरता बढाउन सक्छौं र अर्थतन्त्रलाई सबल रुपमा अघि बढाउन सक्छौं । अर्थतन्त्रलाई दीगो रुपमा अगाडि लैजान सक्छौं । किनभने हामीसँग सबै कुरा छन् । यी सबै कुराहरूलाई सदुपयोग गर्न सक्छौं । यी कामका लागि हामी सानातिना कुराहरूमा अल्झिन हुँदैन ।
म कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सानातिना कुराहरू केही छन् भने हुनसक्छ हामी यता ‘मञ्चमा’ बस्नेहरूको आलोचना पनि छ होला । यो ठूलो कुरा होइन, हामी सुन्न तयार छौं । हुनसक्छ, दुईवटा अध्यक्षको आलोचना होला, केही छैन त्यो पनि सुन्न तयार छौं । र, सच्याउनु पर्ने ठाउँहरू छन् भने सच्याउन तयार छौं । यो त देशका लागि गर्ने कुरा हो, व्यक्तिका लागि होइन । यहाँ अहम्को कुरा होइन, जिद्दीको कुरा होइन । यो देशका लागि गर्नु पर्ने काम हो । देशलाई अगाडि बढाउने कुरा हो, हाम्रो काँधमा जुन अभिभारा आएको छ, इतिहासले जुन अभिभारा दिएको छ र हामीले जुन सहजताका साथ यसलाई स्वीकारेका छौं, यो अवसर हामीले प्राप्त गरेका हौं, यो कतैबाट मौकावश आएको होइन । यो अवसर मौकावश आइलाग्यो, क्या गजबले, अनौठो ढंगले मौका पायौं या हामीले संयोगद्वारा यो अवसर पायौं भन्ने होइन । संयोगवश कहिलेकाहीँ क्यारेमबोर्डमा बच्चाले यसो गोटी हान्छ र गएर त्यो झुक्किएर ट्वाक्क प्वालमा पस्छ नि । त्यस्तै गरेर झुक्किएर, संयोग परेर यस्तो भएको होइन ।
कसैले बाटोमा खसाएको पैसा, यसो कसैले नोट भेट्टाएजस्तो, मान्छेले कहिले कहिले भेट्टाउँछ नि । बेहोसीले खसाएको पैसा – त्यस्तो हामीले बाटोमा भेटेको कुनै चिजजस्तो यो अवसर भेट्टाएको होइन । यो त रगत पसिनाबाट आर्जेको उपलब्धि हो । यसकारण यसलाई हामी गुमाउन चाहँदैनौं र गुमाउनु पनि हुँदैन । यसमा हामी गम्भीर हुनैपर्छ । र, म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, लिडरशीप यसमा गम्भीर छ र हामी गम्भीर छौं । हो, यसमा बिलम्व भएको छ, एकताको प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने कुरामा विलम्ब भएको छ । अलिकति समयसम्म पुरानो पृष्ठभूमिले अलिअलि तान्छ पनि । कहिलेकाहीँ बोल्दा, मैले अहिले पनि नेकपा नभनेर एमाले भनिराखेको हुन्छु । यो पृष्ठभूमिले तानेको हो, बोल्ने बानी परेकोले बोल्दै जाँदा फ्याट्ट एमाले भनिहालिन्छ । अनि सम्झिंदाखेरि ए हामी त नेकपा भइसकियो, डेढ वर्ष भइसक्यो नेकपा भएको भन्ने थाहा हुन्छ । एमाले भन्ने घरीघरी आउँछ, यो पृष्ठभूमिले गर्दा भएको हुन्छ । यो बोलीमा मात्रै होइन, कहिले कहिले काममा पनि त्यस्तो स्थिति आउला, त्यसलाई अब हामीले राष्ट्र निर्माणको मूल्यमा छोड्दै जानुपर्छ । त्यसलाई ब्र्सििँदै जानुपर्छ र हामीले फराकिलो भावनाका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ ।
सफलता त हाम्रै हातमा छ ।
देशको अपेक्षा यही छ, सिंगो पार्टी कार्यकर्ताहरूको अपेक्षा यही छ र अहिलेको आवश्यकता पनि यही हो । हामीले एकजुट भएर यही आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ । सफलता हाम्रो आफ्नै हातमा छ । हामीले नै सफलता हासिल गर्ने हो । यसरी अझ सफलता प्राप्त गर्दै म साथीहरूमा आग्रह गर्दछु र सबैमा शुभकामना भन्दै आफ्नो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु । धन्यवाद ।
Previous नेकपा केन्द्रीय कमिटीको बैठक: आज अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेलले जवाफ दिने
Next प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै
भीमार्जुन आचार्य लेख्छन्- पृथ्वीनारायणले निर्माण गरेको राष्ट्रमा रजाइँ गर्नेले उनलाई नसम्झे पनि हामी सम्झिन्छौं
२७ पुष २०७८, मंगलवार ०२:०४